Ilegbachi ntị ka mma karịa ihe nkiri na-enweghị isi. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ahụmahụ dị iche iche na-akpalite anyị n'ụzọ dị iche. Mana anyị niile ga-amụta imeghachi omume kwesịrị ekwesị n'ọnọdụ ọnọdụ dị iche iche mmeghachi omume anyị bara uru emepụtakwala mmetụta ọjọọ ọ bụla na onye ọ bụla.
Mgbe ụfọdụ, obi jọrọ anyị njọ maka mmeghachi omume, ma iwe na-ewe anyị. Ma mgbe ụfọdụ, anyị na-enwe mmetụta na anyị nwere echiche siri ike ma ga-ekwupụta nke ahụ mana buru ụzọ buru ụzọ chee maka mmerụ ahụ. Nmeghari a nwere ike ghara itinye naanị gị kama ọ nwere ike na-emetụta onye ọzọ.
Mgbe nile tụọ nsonaazụ nsonaazụ ndị a ma e jiri gị tụnyere ị na-ekwupụta echiche gị. N’ezie, guzogide ajọ omume ọ bụla mana na-ekpe ikpe mgbe niile tupu ị na-emeghachi omume. Mmeghachi omume gị ekwesịghị imesi ndị ọzọ ike.
Cheta na ọ ka mma mgbe niile ịzere ihe nkiri enweghị ihe ọ bụla site na ịgbachi nkịtị. Enwere ike inwe oge kwesịrị ekwesị na oge ga-enyere gị aka idozi ọnọdụ ahụ. Yabụ, ọ dị mkpa ka anyị nwee ike ikpebi ọnọdụ ahụ ma meghachi omume otu ahụ.
Mgbe ụfọdụ ịgbachi nkịtị na-adọtaba gị n'ime ihe nkiri a na-atụghị anya ya nke ị nwere ike ị chọghị. Yabụ, mgbe ị hụrụ ọnọdụ ebe enwere echiche dịgasị iche na echiche gị agaghị eweta mgbanwe dị mkpa ozugbo, gbachi nkịtị.
Ininggbachi nkịtị apụtaghị na ị na-agbanahụ ihe ị ga - eme. Mee nwayọ maka omume na-ada ụda karịa okwu.
Mee ọrụ achọrọ nke ga-aba uru ma nwee mmetụta dị ukwuu ma nwee mmetụta dị mma mgbe ị na-eleba anya n'okwu a. Nke ahụ bụ ụzọ kacha arụ ọrụ iji lebara ọnọdụ anya ma ghara ịbụ onye a dọpụrụ pụọ na mmerụ na-enweghị isi.
Nwee okwu Quest ka mma
Ọ ka mma ka ịgbachi nkịtị na-ekwu okwu
Kwuru Banyere Ihe Nkiri Na-abaghị Uru
Kwuru okwu na Ọnọdụ Silence
Kwuru okwu amamihe
Okwu Amamihe na Ilu
Họrọ nhọrọ n'ọgụ gị, emela ka nsogbu niile bụrụ agha. - Amaghi ama
Mara na mgbe ị na-etolite, ị ga-enwe nsogbu dị iche iche. Ga amata na ime…
Ọ bụrụ na ị ka na-ekwu maka ihe ị mere ụnyaahụ, ịmebeghị ọtụtụ taa. - Amaghi ama
Ọ bụrụ na ị ka na-ekwu maka ihe ị mere ụnyaahụ, ịmebeghị ọtụtụ taa. - Amaghi ama…
Oge ụfọdụ ihe mmadụ chọrọ abụghị oke nkọ nke na-ekwu okwu, kama ọ nwere obi onye na-anụ ihe. - Amaghi ama
Ndi mmadu bu anumanu na-elekọta mmadu. Anyị chọrọ onye anyị nwere ike ịkọrọ ihe anyị chere na kerịta ndị anyị…
Iche echiche karịrị akarị na-emerụ uche, na-emebi obi ụtọ, ma na -eme ka mmadụ nwee nsogbu ndị a na-enwebebeghị. - Amaghi ama
Iche echiche karịrị akarị na-emerụ uche, na-emebi obi ụtọ, ma na -emepụta nsogbu na-adịbeghịdị na mbụ.…